जानी राख्नुस्, कस्ता साथी काम लाग्दैनन् ?
हाम्रो जीवनमा राम्रो साथी र सुसंगतको धेरै महत्त्व छ । बुवाआमा र ज्येष्ठहरूबाट पाएको अनुभवको ज्ञानजत्तिकै साथीबाट ज्ञान पाइन्छ । संगतले जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । खराब साथीसँग संगत बन्यो भने हामी सफलताबाट टाढा पुग्छौं । आफ्नो बहुमूल्य समय नालायक साथीसँग गुजार्नु हुँदैन । कस्ता साथी काम लाग्दैनन्, तल बताइनेछ ।
जतिखेर पनि आलोचना गर्ने साथीको काम छैन । आफूले कडा मेहनत गरेर राम्रो गन्तव्य हासिल गरेपनि त्यसको प्रशंसा नगरेर ईर्ष्यावश आलोचना गर्ने साथीलाई कसरी राम्रो भन्न सकिएला र ?
कोही साथी चाहिँ जसरी भएपनि आफ्नो कुरा मान्नुपर्ने सोच पाल्छन् । यस्ता साथीले कहिलेपनि तपाईंको भलो चाहँदैनन् । यिनीहरूबाट टाढै बस्नु ठीक ।
स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि मात्र साथी बनाउनेबाट पनि टाढै बसेको जाती । आफूलाई काम पर्दा मात्र सम्पर्कमा आउने यस्ता साथीसँग बस्नु भनेको समयको बर्बादी मात्र हो ।
नकारात्मक सोच भएका साथी परे भने आफ्नो दृष्टि पनि नकारात्मक हुन पुग्छ । यसले हामीलाई सफलतातर्फ जान दिँदैन । यस्ता साथीलाई बाईबाई गरेको ठीक ।
कुनै कुनै साथी चाहिँ हो मा हो मिलाउने खालका मात्र हुन्छन् । तपाईंले कुनै कुरा राख्दा सोचविचार नगरिकनै हो भनिदिने साथीले तपाईंलाई चाहिने बेलामा मद्दत गर्न सक्दैनन् ।
तपाईंलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा साथ छोडिदिने साथी पनि काम छैन । यस्ता साथी एकदमै खतरनाक हुन्छन् र यिनीहरूसँग समय बिताउनु व्यर्थ हुन्छ । कुनै बहानामा यस्ता साथीको परीक्षण गर्नु उचित हुन्छ ।
सच्चा साथी हाम्रो प्रगतिबाट खुशी हुन्छन्, सही बाटो देखाउँछन्, सुखदुःखमा साथ दिन्छन् र कठिन परिस्थितिमा साथ दिन्छन् । सही सल्लाह दिने साथी नै महान् हो ।